Indlu encinci ukubaleka uxinzelelo
Kutshanje ukubuyiselwa kwendlu yasemaphandleni enefenitshala entsha netofotofo kakhulu. Konke ngaphandle kokulahlekelwa ngumoya we-rustic wolu hlobo lwendawo yokuhlala. Izinto ezisetyenziselwa ukwakhiwa kobunzima obusekelwe kwimithi, ilitye kunye nodongwe. Inegumbi layo lokuhlambela. Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo. Ikhitshi elixhotyiswe nazo zonke izixhobo eziyimfuneko. Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini. I-terrace yakho enemibono emangalisayo yehlathi. Ukuzola, uxolo kunye nemvisiswano.
I-complex yangasese yee-Apartments ezi-7, kunye nodidi lwezitshixo ezi-2, ezisasazwe ngaphezu kwe-12,000 yeemitha zesikwere seendawo eziluhlaza, ii-barbecues, iitafile zepikiniki kunye nedama elijikelezwe yi-shades kunye ne-hammocks. Kwintliziyo ye-Sierra Natural de Huetor, egqibeleleyo kubathandi bendalo, ngokufikelela ngokuthe ngqo kuhola wendlela, i-15 km ukusuka eGranada kunye nemizuzu engama-40 ukusuka eSierra Nevada.